"ဟလို .... ဟလို ... ကြားလား ... ဟလို"
မြန်မာ ပြည်ကို လန်ဒန်စံတော်ချိန် မနက် ၃ နာရီလောက်တွင် လူငယ်တစ်ယောက် ဖုန်းခေါ်ဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ စပြီးခေါ်ကာစက မိနစ်တွေသာ စားသွားသည်၊ လုံးဝအဆင်မပြေ။ တစ်ဘက်မှအသံကို ခေါ်သူဘက်မှ ကြားရပြီး မိမိ၏ အသံကို တခြားဘက်မှ မကြားရဘဲဖြစ်နေသည်။
ဘယ်လိုများ ဖြစ်နေပါလိမ့်။ နောက်တော့ သီးခံခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းဆိုရာ၏ ဆိုသလိုပဲ ကြိုးစားပမ်းစား သီးခံစိတ်ရှည်ပြီးခေါ်ဆိုမှ ရတော့သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က မီးသွေးတုံးကြီး မြန်မာပြည်ရောက်နေတော့ ဖုန်းလိုင်းတွေ တော်တော်ကြပ်သည်ဟု ပြောသံကြားပါသည်။ အခု မီးသွေးတုံးလည်း ပြန်သွားပါပြီ။ သို့သော် ဖုန်းလိုင်းတွေက အဆင်မပြေဖြစ်ဆဲပဲ။
မြန်မာပြည်ကလည်း အလွန်ပင် အဆင်အတန်းမြင့်မားသော နိုင်ငံဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ နာရီဝက်သာသာ စကားပြောဆိုနိုင်ရုံ ဖုန်းကတ်တစ်ကတ်ကိုပင် ၂ ပေါင်ခွဲလောက်ပေးရသည်။ ပေးရသည့် ဖုန်းကတ်ဖိုးနှင့် ပြန်ရသည့် service က ဘာမှမဆိုင်။ တစ်ခါတစ်ခါ အကောင်းမြင်ကြည့်ပါသေးတယ်။ ဖုန်းကတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်မှာပဲ ဒါမှမဟုတ် ဒီကပဲ လိုင်းတွေကြပ်နေလို့ ဖြစ်မှာပါဟု ပြောင်းလဲတွေးကြည့်သေးသည်။ သို့သော် တကယ်ဖြစ်နေတာက မဆိုင်ရေးချ မဆိုင်။
အိုဘယ့် ... ဘဘများ၊ ဆသရ(ဆိတ်သား ရောင်းဝယ်ရေး) ကိုကိုများ ... အပြောတွေ ကြီးမနေပါနဲ့ အလုပ်နဲ့ပဲ သက်သေပြကြပါ။
Nandar 7:15 am
Ha ha ha..., Yee ya tae heeeeeeeey.
AMMK 9:53 am
I can understand ur feeling very well, Bro! I feel the same way like u for the present time.
CMS 12:12 am
nandar .. easy .. Hold your horses :P
ammk .... ya bro. thx. hope that'll be ok in the near future.
sltmycom 2:41 am
ငါဆို အမြဲပဲ အဲလို ဖုန်းမိနစ်တွေ အလကားဖြစ်ကုန်တာ...
IDD card ၀ယ်ပြီး ခေါ်မယ်လုပ်လိုက် ဈေးအကြီးဆုံးက...
CMS 1:19 am
ပြောလေ အကုသိုလ်များလေပါပဲ သူငယ်ချင်းရာ မပြောတာပဲကောင်းပါတယ်။
What is Baseline Shift in Photoshop?
Moving the clocks forward one hour in The UK
The Shinny Floor Effect
New Logo for Design Contest
အိုဘယ့် ... အနော်ရထာ နှင့် အော့ကျောလန် ကိုကိုများ
9 Web Design No Nos for the Newbie by Mathrew Grif...
WebbAlert - Your Daily Tech Round-Up
Let's Bypass firewall
Create CSS Menu Online with IzzyMenu.com
အိုးကလေး အလှုပ်ကောင်းလို့ စင်ပြိုသွားခြင်း
Useful Gmail queries
Myanmar Singer Sai Htee Saing passes away
OS and Softwares I currently use
Norton Antibot with 1 year key
Downloading Movies from internet with RealPlayer
How to do the Colorswash Technique in Photoshop
Canoeing on the River Thames
NDD Monthly Chronology February
Fix your digital photos By Brian Cooley